10ka Isbeddelka Suuqgeynta Dijital ah ee Ugu Muhiimsan 2021 | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/10ka Isbeddelka Suuqgeynta Dijitaalka ah ee ugu Muhiimsan 2021
10ka Isbeddelka Suuqgeynta Dijitaalka ah ee ugu Muhiimsan 2021
2020 wuxuu ahaa sanad aan horay loo arag dhammaan xisaabaadka, tuurista caqabadaha ganacsiga badankoodu weligood ma malayn karin, iska daa in loo qorsheeyo. Mahadsanid saddex bilood oo keliya ayaa laga joogaa 2021 oo u ekaanshihii caadiga ahaa waxay u muuqdaan inay soo laabanayaan - in kasta oo ay jiraan digniino.
Qaar badan oo naga mid ah ayaa ku qasbanaaday inay sameeyaan isbeddelo ba'an oo ku yimaada habka aan u shaqeyno. Qaar badan oo naga mid ah ayaa la shaqeeya macaamiisha ama macaamiisha ay ku qasbanaadeen inay sidaas oo kale sameeyaan. Saamaynta tani waxay sii ahaan doontaa in la dareemo muddo dheer ka dib marka caadiyadu dib u soo noqoto, tanna waxaa ku jira sida aan u suuqgeyneyno nafteena.
Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa had iyo jeer horumarisa. Sannad kasta isbeddello cusub ayaa soo baxa. Xeeladaha jira waxay bilaabaan inay helaan jiidashada. Iyo qaar kale oo iska casilaya qashinka.
2021 waa ka yara duwan yahay.
Ma aha sababtoo ah ma jiraan wax isbedel ah. Ka fog. Laakiin sababtoo ah wax badan oo isbeddelka wadista ah lama arag (ugu yaraan nooca miisaanka la arkay 2020) tan iyo wakhti dheer kahor imaatinka internetka.
Haddii aan doonayno inaan tan wax ka baranno, waa sida ay muhiimka u tahay in mustaqbalka laga caddeeyo summadayada wax aan la filayn. Ku kordhin daacadnimada sumadda. Si loo kala saaro. Si aad diyaar ugu ahaato la qabsiga Oo aan si adag isu suuqgeynno iyo ka caqli badan.
Ogeysiiskaas u dambeeya, halkan waxaa ah 10 ka mid ah isbeddellada suuq-geynta dhijitaalka ah ee ugu muhiimsan in fiiro gaar ah loo yeesho 2021.
1. Shirkado badan ayaa qaata tignoolajiyada AI
Waxaan hubnaa inaad maqashay AI iyo Barashada Mashiinka - laakiin ma ogtahay inay si ka badan waligeed u heli karto ganacsiyada miisaaniyad?
AI waxay awood u siin doontaa mustaqbalka suuqgeynta dhijitaalka ah, 2021-na waa marka aan arki doonno inay kacday. Suuqgeeyayaashu waxay u isticmaali karaan AI:
Abuuritaanka nuxurka (haa, nuxurka qaar uma baahna qoraa bini'aadam ah)
Chatbots oo bixin kara adeegga macaamiisha
Software-ka SEO kaas oo qori kara kumanaan sharraxaad alaab ah arrin daqiiqado ah
Kelmad taxaddar leh markaad bilowdo inaad eegto sida aad AI ugu dabaqi karto suuqgeynta dhijitaalka ah, si kastaba ha ahaatee. Shirkadaha qaarkood waxay isticmaalaan odhaahda iyaga oo aan dhab ahaan u adeegsan AI adeeggooda. Ka digtoonow wax soo saarka qalabkan oo waligaa ha maalgashan adigoon si fiican u hubin waxa dhinaca kale ka soo baxa.
Iyadoo laga yaabo inay u muuqato hab weyn oo lagu badbaadiyo lacagta iyo kheyraadka, macaamiisha AI ayaa weli ku jira marxaladaha hore ee horumarkeeda.
Taasi waxay tidhi, waa hab wanaagsan oo lagu hor mari karo. Eeg xogtan waxaa soo ururiyay Adzooma.
2. Waxyaabo sahlan oo si fudud loo isticmaali karo waxay noqon doontaa mid aad u baahsan
Sida qof kasta oo ka mid ah suuqgeyntu uu ogyahay, Google ayaa had iyo jeer sheega in nuxurku yahay boqor.
Muddo ka dib cilmi-baadhisyada qaarkood ayaa taas muujiyay content dheer matalaa ka fiican. Laakiin daraasadahani waxay leeyihiin hal dhibaato. Marar dhif ah ayay ku salaysan yihiin natiijooyin goob gaar ah ama meel gaar ah. Waxayna tani natiijada ka dhigaysa wax yar oo marin habaabin ah.
Suuqgeeyayaashu waxay abuureen hagayaal hal-abuur leh iyo qaybo ka kooban nuxur ka badan 1500-ka eray ee aadka loo jecel yahay. Laakiin waxaa jira nuance ka badan taas.
Waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa ka shaqeeya toosankaaga. Maxaa kaa caawinaya inaad u beddesho booqdayaasha macaamiisha.
Iyadoo ay soo ifbaxday darajada marin ku salaysan ka Google, waxaan aragnay isbedel. Waxa injiilka ahaa (inta ay khubarada suuqgeyntu khusayso) run maaha. Google ma awoodo in uu eego qaybaha kala duwan ee goobta oo kaliya, laakiin sidoo kale qaybaha kali ah ee nuxurka laftooda.
Suuqgeeyayaasha dhijitaalka ah ee horay u fakarayey ayaa tan arkay oo waa horeba hagaajinta nuxurkii hore si aad ugu daydaan waxa ugu wanaagsan.
In kasta oo ay inta badan tahay sheeko-xumo, waxaan aragnay in nuxurka ugu sahlan yahay in la isticmaalo, sida ugu wanagsan ee ay u qabato.
Marka aynu nidhaahno si fudud in la isticmaalo, waxaan si gaar ah uga hadlaynaa:
Mawduuca ka jawaabaya su'aalo gaar ah halkii ay ahaan lahayd hage hal-abuur leh
Nuxurka loo kala qaybiyay qaybo kala duwan
Nuxurka si muuqata u soo jiidasho badan
Mawduuca u adeegaya ujeedada isticmaalaha oo ku haga inay qaadaan ficilada ay damceen inay gaadhaan
Filo inaad aragto wax badan oo tan ka mid ah 2021 iyo si fiican mustaqbalka.
Relacionado: Sida Loo Abuuro Istaraatiijiyada Suuqgeynta Macluumaadka
3. Xakamaynta kanaalada Baraha Bulshada waxay noqon doonaan kuwo ku foogan maskaxda suuqgeynayaasha warbaahinta bulshada
Waa maxay? Ka takhalusida kanaalada warbaahinta bulshada waxay noqon doontaa isbeddel suuqgeyn 2021?
Waxaan aragnay dhawaanahan dib u soo kabashada summadaha sida Chase iyo Uber gebi ahaanba deminta xayeysiisyada dhijitaalka ah ee lacagta lagu bixiyo, iyada oo aan hoos u dhac ku iman caadada ama dakhliga. 2021, filo inaad aragto tiro sii kordheysa oo magacyo raacaya oo u guuraya qayb, haddaysan ahayn gebi ahaanba, kana fogaanaya bulshada lacagta la bixiyo.
Muddo sanado ah calaamaduhu waxay moodayeen in kanaalada badan ee ay ku jiraan, ganacsi badan oo ay wadi doonaan. Way caddahay in tani aanay ahayn mid sii jiri karta. Waxaad u baahan tahay inaad wax badan doorato.
La yaab maaha marka aad eegto inta channel ee aad ku *shaqayn karto*
Ma doonaysaa in aad dhammaan kanaalada warbaahinta bulshada ka saarto kaydkan tignoolajiyada ah?
Sida suuqleydu u ururiyaan xog badan si ay uga caawiyaan inay ogaadaan kanaalada dhabta ah ee ku daraya xariiqda hoose, ka filo inay bilaabaan inay gooyaan kuwa aan iyaga siin ROI.
Relacionado: Facebook, Twitter, ama Pinterest? U dooro habka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada ee ganacsigaaga
4. UGC si kor loogu qaado khibrada macaamiisha
UGC (ama Content uu abuuray Isticmaale) ayaa sumcad xumo ku leh suuqgeynta dhijitaalka ah. Qaybaha dhaqameedku waxay u furnaayeen kuwa kale inay wax ku biiriyaan, inta badan iyada oo aan dhexdhexaad ahayn. Tani waxay u horseedi kartaa arrimo badan - gaar ahaan arrimaha ku kalsoonow dhinaca Google-ka (wax badan oo tan dambe ah).
Laakiin waxa ay arkaysaa dib u soo kabashada; ma aha oo kaliya mareegaha laakiin sidoo kale kanaalada bulshada.
Iyagoo bixinaya dhiirigelin sida qiimo dhimis iyo lacag-la'aan, calaamaduhu waxay taaban karaan dhagaystayaashooda - dadka horay u jeclaa calaamaddooda - si ay u faafiyaan farriintooda si wax ku ool ah oo dheeraad ah.
Marka ay jirto buuq badan oo ka jira kanaalada suuq-geynta dhijitaalka ah, waxa ay noqonaysaa mid ka yaraata summada iyo in badan oo ku saabsan dadkii horay u isticmaalay.
Ku darso in ay hoos u dhigayso xadiga nuxurka ah ee ay tahay in ganacsatadu ay soo saaraan, waana xaalad guul-guulaysi ah.
Relacionado: Sida loo Horumariyo & Suuqgeynta Mareegahaaga Suuqgeynta Saamaynta
5. Dhacdooyinka Farshaxanka ah ayaa ku dheggan
2020, doorasho maynaan haysan.
Haddii aan rabno in aan dhigno dhacdo ama shir, waxay ahayd inay noqoto mid muuqaal ah. Haddii aan rabno inaan ka qayb galno shir ama dhacdo, waxay ahayd inay noqoto mid muuqaal ah.
COVID-19 wuu beddelay dhacdooyinka weligood. In kasta oo dhacdooyinka iyo shirarku ay ku soo laaban doonaan adduunka dhabta ah mar uun, qabanqaabiyayaal badan ayaa laga yaabaa in ay ku ilaashadaan si toos ah (ama ugu yaraan isku dhafka u dhexeeya shaqsi ahaan iyo dhacdooyinka la taaban karo). Waxaa jira faa'iidooyin labada dhinac ah:
Dhacdooyinka dhabta ah waa ka raqiisan yihiin in la xidho oo sidaas awgeed way ka jaban yihiin - haddaysan ahayn bilaash - ka qaybgalayaasha.
Ma jiraan wax xaddidan oo juqraafi ah - dhacdo macmal ah ayaa laga soo qayb geli karaa meel kasta oo adduunka ah oo leh isku xirka wifi wanaagsan. Tani waxay faa'iido u leedahay ka qaybgalayaasha, laakiin sidoo kale waxay faa'iido u leedahay qabanqaabiyeyaasha, kuwaas oo leh barkad karti weyn oo ay ka soo jiidaan marka ay timaado kuwa ku hadla.
Marka ay dadku si aad ah ula qabsadaan dhacdooyinka casriga ah, waxay suurtogal u noqon doontaa shirkadaha yaryar inay soo bandhigaan dhacdooyinka markii hore, kharashyadu waxay ahaayeen kuwo mamnuuc ah.
Dhacdooyinka niche ee ay adkaan lahayd in la dhejiyo iyadoo ay ugu wacan tahay tirooyinka dhageystayaal yar ayaa horay u socon kara marka online lagu qabto.
Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan ku soo laabanno nooc ka mid ah caadinimada. Waxaan rabnaa inaan dadka ag joogno (si fiican, qaar naga mid ah), laakiin waxaa jiri doona doorasho weyn oo dhacdooyin ah. Taasi waxay ku habboon tahay macaamilka iyo ka-qaybgalayaasha in ka badan.
Relacionado: Sida Loo Sameeyo Website Dhacdadaada (4 Tallaabo)
6. Kordhinta Codka iyo Raadinta Muuqaalka
Marka ay warbixinadu intaas muujiyaan Ku dhawaad ​​55% guryaha Maraykanka ayaa gurigooda ku yeelan doona nooc ka mid ah ku hadasho caqli badan marka la gaadho 2022, waxaad arki kartaa sababta ay tani u noqon doonto suuq-geynta dhijitaalka ah ee soo baxaya laga bilaabo 2021 wixii ka dambeeya.
Suuqgeeyayaasha savvy waxay og yihiin in cod raadinta ay noqon doonto mid muhiim ah mustaqbalka haddii aad rabto macaamiishaada ama macaamiisha mustaqbalka inay ogaadaan cidda aad tahay iyo waxaad u taagan tahay.
Codka raadinta wuxuu ku saabsan yahay summeynta iyo gaarsiinta macluumaadka ku saleysan qiimaha macaamiishaada.
Qaar ka mid ah noocyada kala duwan, raadinta muuqaalku waxay door muhiim ah ka ciyaari doontaa istiraatijiyadooda waxayna bilaabi doontaa inay iskeed u soo baxdo 2021.
Marka aad haysato summado soo dhaweeya Pinterest Lens iyo Google Lens, waxaad u baahan tahay inaad joojiso oo aad ka fikirto. Haddii ay arkayaan guul, sidee bay u samaynayaan? Sidee bay u isticmaalayaan si ay ganacsi u wadaan?
Raadinta muuqaalku waxay noqon doontaa hore u socod weyn, oo haddii aad ku jirto meel fiican sida moodada, quruxda, cuntada, ama qurxinta guriga, waa inaad isha ku haysaa (aan ciqaab loogu talagelin) horumarka. Waxaa laga yaabaa inaadan u baahnayn inaad noqoto maverick ama hormuud, laakiin waxaad u baahan tahay inaad hore u korsato haddii aad rabto inay u shaqeyso astaantaada.
7. Google Core Updates iyo EAT
Google ayaa si gaar ah u mashquulsan dhowrkii sano ee la soo dhaafay, iyadoo ku dadaalaysay inay hubiso in natiijooyinkooda raadinta ay yihiin kuwo khuseeya sida ay suurtogal tahay. Iyadoo tani ay had iyo jeer ahayd hadafkooda, waxay u muuqdaan inay kor u qaadeen dhawaanahan.
Waxaa jiray dhowr isbeddel oo muhiim ah oo algorithm-kooda ah saddexdii sano ee la soo dhaafay - oo loo yaqaan Cusbooneysiinta Core. Iyadoo milkiilaha goobtaada caadiga ah laga yaabo inuusan ka warqabin kuwan, inta badan suuqgeyniyeyaasha dhijitaalka ah waa.
Haddii aad rabto in aad ogaato in goobtaada ay saameysay, waad hubin kartaa adigoo isticmaalaya qalabkan quruxda badan. Si fudud u gal magacaaga domainka si aad u aragto haddii aad ku guulaysatay ama aad guuldaraysatay mid kasta oo ka mid ah waxyaalahan cusub.
Laakin sidee milkiilayaasha domain-yada iyo mareegaha u hubinayaan in ganacsigoodu uu sii ahaado midda ugu sarreeya cusbooneysiintan?
Taasi way ka sii adag tahay - gaar ahaan marka Google aanu si cad u sheegin isbeddellada ay sameeyeen. Taasi waxay tidhi, waxaad akhrin kartaa inta u dhaxaysa khadadka marka ay wax ku wadaagaan akoonkooda Google SearchLiaison Twitter.
Maamulayaasha shabakadaha iyo khabiirada SEO waxay xooga saarayeen hagaajinta goobahooda iyagoo wata xeelado dhowr ah.
Isku day inaad ku horumariso Cunista Tdhaxle Siris
Haa, waxay u muuqataa wax aan caadi ahayn, laakiin waxay u taagan tahay Khabiir, Maamul, iyo Kalsooni. Si fudud u dhig, tani waxay ku saabsan tahay kordhinta - ama ugu yaraan muujinta - inaad khabiir ku tahay goobtaada. In macluumaadkaaga loo tixgeliyo inay ka awood badan yihiin kuwa kale ee ku jira meeshaada.
Ma haysanno wakhti ku filan oo aan ku galo halkan, laakiin waxaad wax badan oo ku saabsan EAT ka akhriyi kartaa maqaaladan:
Cun iyo SEO: Sida Loo Abuuro Waxyaabaha Google Rabo
Waa maxay EAT? Waa maxay sababta ay muhiim ugu tahay SEO
Waa maxay EAT iyo YMYL: Tilmaamaha Raadinta Google ee Cusub
Hagaajinta Website Uxasillooni
Si kale haddii loo dhigo, fiiro gaar ah u leh safarka isticmaalaha iyo hagaajinta kaaga waayo-aragnimo isticmaale (UX) oo ka jawaabaya. Google waxa uu rabaa in uu abaalmariyo goobaha bixiya khibrada ugu fiican ee suurtogalka ah marka ay ku jiraan boggooda, markaa tani waa mid (aad u muhiim ah) oo ka caawinaysa goobtaada inay kor u qaadaan darajooyinka.
Ka filo labadoodaba inay muhiim u yihiin istiraatiijiyaddaada SEO 2021 iyo wixii ka dambeeya - gaar ahaan marka Google uu soo baxo Vital Muhiimka ah[a] oo ah qodobka qiimaynta dabayaaqada sanadkan.
Hagaajinta Matoorka Raadinta Waa La Sameeyay Fudud
Waxaan ka qaadnaa male-awaalka (iyo shaqada dhabta ah) ee kobcinta taraafikada boggaaga SEO.
8. Tilmaamaha SERP ayaa noqday xitaa muhiim
Muddo dhowr sano ah, Google waxa uu ku soo daray waxyaabo badan oo cusub oo ku saabsan moobilka iyo miiska labadaba. Suuqgeeyaha dhijitaalka ah ee aan caqli-gal ahayn ayaa odhan doona tani waxay ku sii haynaysaa isticmaalayaasha Google muddo dheer, sidaa darteed xayeysiisyo badan ayaa loo adeegi karaa. Laakiin sidaas uma fududa.
Waxay u adeegaan ujeedo kale. Si dhab ah ayey faa'iido ugu leeyihiin isticmaalaha (waligaa ha iloobin in Google's diiradda markii hore ahaa "inuu habeeyo dhammaan macluumaadka adduunka.")
Tilmaamaha Natiijooyinka Matoorka Raadinta ee ugu caansan waxaa ka mid ah:
Kumbuyuutarrada ugu caansan
Dadku sidoo kale way is weydiinayaan
Natiijooyinka wax iibsiga
Maaddaama hantida ma-guurtada ah ee natiijooyinka raadinta ay sii yaraanayso, waxaad hubin kartaa in suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ay ka shaqeyn doonaan habka ugu wanaagsan ee shabakadaha ay ka shaqeeyaan si ay u helaan muuqaal badan.
Dhawrkii sano ee la soo dhaafay, waxaanu aragnay hagayaal badan oo lagu heli karo qaybo muuqda oo boggag ah, si loo sugo booska ugu sarreeya weydiimo kasta oo raadinta ah. Laakiin suuqgeynayaal badan oo badan ayaa hadda raadinaya inay arkaan meel kale oo ay ka heli karaan muuqaal.
Ilaa iyo inta ay SERP-yada sifooyinku u qiimeeyaan taraafikada iyo dakhliga, suuqleydu waxay isku dayi doonaan inay ka faa'iidaystaan.
Isha ku hay sifooyin cusub marka la bilaabayo, oo ku bood meesha puck u socdo.
9. Tijaabada SEO waxay noqon doontaa mid caan ah
Suuqgeeyayaal badan oo dhijitaalka ah ayaa maalgalinayay CRO (Wanaajinta Heerka Beddelka) sanado, waana sax. Waxay kaa caawinaysaa in dakhli badan (ama horseedo) ka dhaliso taraafikada aad horeba u heshay. Maxaan la jeclayn?
Nasiib darro, tijaabinta ayna search engine beryahan dambe waxa ay noqotay wax dhib ah. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ayaa helay xalal. Qaado Pinterest iyo eBay, tusaale ahaan. Waxaad ka akhrisan kartaa imtixaankooda iyo tijaabooyinkooda halkan:
Demystifying SEO oo leh tijaabooyin | by Pinterest Engineering
Ugaadhsiga Bogga Labaad iyo Farsamada SEO ee Miisaanka
Si kastaba ha ahaatee, hirgelinta istaraatijiyad noocan oo kale ah waa adag tahay koox weyn la'aanteed. Natiijo ahaan, goobo badan ayaa soo baxay kuwaas oo ka dhigaya tijaabinta mid la awoodi karo oo la heli karo, abuurista fursado ganacsiyada yaryar si ay ugu boodaan bandwagon CRO. Kuwani caadi ahaan waxay isticmaalaan xogta Google Search Console midkood iyo A / B imtixaanka.
Iyadoo software-yada qaarkood ay wali wax yar qaali u yihiin ganacsiga caadiga ah (sida Baadh Baadhitaan), Dhowr ikhtiyaar oo ka jaban ayaa runtii fududeynaya in la soo saaro tijaabooyinka ka dibna lagu dabaqo barashada qaybaha kale ee boggagaaga ama boggaga kale gebi ahaanba.
Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato sida tijaabada SEO u shaqeyso, waa inaad hubisaa qalabkan:
Waxaad hubin kartaa in suuq-geynayaal badan oo dhijitaal ah ay durba sidaas sameynayaan oo ay ka caawinayaan ganacsigooda ama macaamiishooda inay helaan darajooyin wanaagsan ee makiinadaha raadinta.
10. Noocyo badan ayaa bilaabay Isticmaalka TikTok
TikTok - waa meel walba, sax?
Waxaan u keydinay isbeddelkii ugu muranka badnaa ugu dambeyntii ulajeedka. Tik Tok wuxuu helay wakiil xun. Waxaa jiray arrimo ku saabsan faafreeb iyo mamnuucid dalalka qaar. Laakin ma dafiri kartid koritaankeeda.
Mareegyada bulsheed qaarkood way yimaadaan oo tagaan, mana aad isha ku hayn kartid dhamaantood - waligaa ha ka fikirin inaad summadaada ku dhejiso dhamaantood (eeg No. 3). Laakin Tik Tok wuxuu u muuqdaa inuu halkaan joogo oo waxaa aqbalay jiilalka yaryar iyo kuwa ka weynba si isku mid ah.
Tik Tok kuma habboona sumad kasta, laakiin waxay dadka qaar u noqon doontaa kanaal qiimo leh. Sida 2021 uu sii socdo, waxaan u maleyneynaa inaad isha ku heyso sida shirkadaha waaweyn ay ugu laalaacaan Tik Tok ololayaasha suuqgeyntooda warbaahinta bulshada iyo waxa aad awoodi karto inaad sameyso si aad ugu daydaan guushooda.
Aragtida Suuqgeynta ee sanduuqaaga
Haddi aad u baahan tahay caawimo helida dhagaystayaal la beegsanayo, doorashada kanaalka warbaahinta bulshada, ama kordhinta wacyiga summada, waan ku caawin karnaa! Isdiiwaangeli si aad u hesho maqaalkeena bishiiba mar si aadan maqaal uga maqnaan.
Waa maxay Istaraatiijiyada Suuqgeynta Dijital ah?
2020 wuxuu ahaa sanad adag. 2021 wuxuu bixiyaa rajo. Noocyo badan oo ku dhibtooday ilaa 12 bilood ee la soo dhaafay ayaa bilaabay inay soo kabsadaan.
Laakiin tani macnaheedu maaha inaynu ku nasanno dareenkayaga. Waxaan u baahanahay inaan wax ka barano dhacdooyinkii sanadkii hore. Waxaan u baahanahay inaan fahamno in raaxada badan ay tahay khatar - in aynaan marnaba saadaalin karin waxa ku wareegsan.
Waxaana loo baahan yahay in aan aqbalno isbeddelka. Sida aan u shaqayno iyo sida aan nafteena u suuqgeyno labadaba.
Qaadashada tignoolajiyada AI
Inaad ka caqli badan tahay kanaalada bulshada ee aan maalgelinno
Beddelka habkayaga abuurista nuxurka
Soo dhawaynta macluumaadka isticmaaluhu soo saaray
Ahaanshaha wax-ku-ool ah halka ay suurtagal tahay
Iyadoo la tixgelinayo raadinta codka iyo muuqaalka
Iyadoo fiiro gaar ah u leh Google's updates
Beegsiga astaamo badan oo SERP ah
Kobcinta beddelka iyada oo loo marayo tijaabada
Kuwani waa dhammaan waxyaalaha caawin doona qaabaynta suuqgeynta dhijitaalka ah 12 ama wax ka badan bilaha soo socda. Dib ha u dhicin. Isku duub. Isticmaal iyaga. Waxaana rajeyneynaa, inaan dhammaan aragno guusha aan u qalano 2021.
Dib u eegista Xtemos Space: 25 Mawduucyada WordPress ee Quruxda Badan Hal Qiimaha ah
Sida Loo socodsiiyo Deeqaha Onlineka ah ee Mareegtaada WordPress